Ogaden News Agency (ONA) – Diiwaan-Galinta Musharaxiinta Madaxtinimada Soomaaliya oo Lasoo Gaba-Gabeeyay.
Diiwaan-Galinta Musharaxiinta Madaxtinimada Soomaaliya oo Lasoo Gaba-Gabeeyay.
Waxaa la soo gaba-gabeeyey diiwaan-gelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee labada Aqal ay soo saareen liiska musharaxiinta isdiiwaan gelisay.
Musharaxiin gaadhaya 24 ayaa is diiwan galiyey, isla markaana buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, waxayna u tartami doonaan doorashada madaxweyne ee lagu wado in ay dhacdo bisha soo socota ee 8 Febraayo 2017 haduu ilaahay yiraahdo.
Waxaa la aaminsan yahay in mid kamid ah shuruudaha Musharixiinta aan la tixgelin kaas oo ahaa in 20 Xildhibaan ama hal Dowlad goboleed ay soo jeediso musharaxnimada shakhsiga u tartamaya xilka Madaxwaynaha, waxaana la tixgeliyey oo keliya sida ay u bixiyeen $30 000 USD.
Doorashada ayaa dhacaysa 8 febaraayo 2017 oo maalin arbaca ah, waxaana ka qayb qaadanaya in ka badan 320 Xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaan Federaalka Soomaaliya.